Ezahlukeneyo - Iindaba zoNcwadi | Iindaba zoNcwadi (Iphepha 2)
Kukho iincwadi ezininzi ze-Elsa Punset, kodwa ezinye zazo zinconywa ngaphezu kwezinye. Khangela ukuba zeziphi, ezona zilungileyo.
I-Kafka kunxweme yinoveli eyindida kunye nephazamisayo ngumbhali waseJapan uHaruki Murakami. Yiza, ufunde ngakumbi ngomsebenzi kunye nombhali wawo.
Fumanisa iintlobo zababalisi beendaba ezikhoyo ezincwadini ukuze uchaze ukuba ngubani oza kubalisa ibali elivelayo emsebenzini.
Kukho uludwe lweencwadi ezininzi malunga nembali yaseSpain, nazi ezinye zeencwadi ezimelwe kakhulu. Yiza udibane nabo.
Iincwadi ezilungileyo zengqondo
Ukufunda kunye nokufunda malunga nokusebenza kwengqondo kukuvumela ukuba ube nendlela enzulu yengqondo yomntu. Yiza, udibane nemisebenzi ebalaseleyo kunye nababhali bayo.
Umsebenzi woncwadi ka-Isabel Allende yenye yezona ndawo zixhaphakileyo kwihlabathi. Yiza, wazi ukuba kutheni kunye neencwadi zakhe ezilungileyo.
UPérez-Reverte ngumbhali waseSpain kunye nentatheli owaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe omninzi ongenasiphako. Yiza ubone imisebenzi yakhe emihle.
Iincwadi ezilungileyo kakhulu
Iincwadi ezonwabisayo, ngenxa yeemvakalelo ezinzulu abanazo kunye nokuzidlulisa, zibambe ezininzi. Yiza, udibane nemisebenzi elungileyo yohlobo.
Inoveli yezembali luhlobo olubaluleke kakhulu, kuba ivumela ukuba iphinde ikhumbule imicimbi ebalulekileyo. Yiza, uyazi eyona misebenzi ilungileyo.
UArsene Lupine ngoyena mlinganiswa udumileyo wenziwe nguMaurice Leblanc. Olu lukhetho lweencwadi kunye nokuphononongwa kothotho olusandula kukhutshwa.
Uzibeka njani iikhoma ngokuchanekileyo, ibe ngumzabalazo kwabaninzi. Nangona kunjalo, kukho imigaqo elula yokukunceda ukufezekisa oku. Yiza udibane nabo.
Iimpazamo zopelo ziqheleke kakhulu kwizicatshulwa, ezincwadini, nakumabonwakude. Kodwa ngaba uyazi ukuba zeziphi eziqhelekileyo?
Andiqinisekanga ngento onokuyithengela abantu obathandayo? Ukuba ufuna izimvo, ngenisa le posi kwaye ufumane ezona ncwadi zilungileyo zokunika le Krisimesi.
Fumanisa ukuba zeziphi izafobe, zeziphi ezikhoyo nezona zixhaphakileyo kwingxelo nakwisihobe.
Ukuba unomdla kweli sebe lezenzululwazi, ungaluphosi olu luhlu lweencwadi ze-8 zengqondo, ezifanelekileyo iingcali kunye nezingezizo iingcali.
Imibongo engamashumi amabini yothando kunye nengoma enomdla
Iingoma ezingamashumi amabini zothando kunye nengoma enqwenelekayo yeyona ngqokelela yeenkondlo efundwa ngokubanzi nguPablo Neruda odumileyo. Yiza, wazi ngakumbi ngomsebenzi kunye nombhali wawo.
Iincwadi ezili-10 ezinconyelweyo kubantu abancinci ukuba babambeke ekufundeni
Ndifuna ukwabelana nawe ngoluhlu lwam lweencwadi ezili-10 ezinconyelweyo kubantu abancinci, ukuze ufumane ukukhuthazeka kwaye wakhe uluhlu lwakho.
UAlice Kellen ligama elikhohlakeleyo lombhali waseSpain, ngakumbi uValencian. Fumanisa banzi ngaye nangeencwadi zakhe.
Ukubetha kwentliziyo yoMhlaba yinoveli yesine epapashiweyo ngumbhali waseSpain kunye nezopolitiko, uLuz Gabás. Yiza, ufunde ngakumbi ngomsebenzi kunye nombhali wawo.
Ababhali u-Isabel Allende, u-Elia Barceló kunye no-Eva García Sáenz de Urturi baphumelele i-Liber 2020, uNcwadi lwaBantwana boLuntu kunye noLutsha kuLwazi kunye nePlanethi yeeMbasa.
I-Metonymy yinto ebhaliweyo echazwa njengesiqhelo sokutshintsha kwesemantic. Yiza, ufunde ngakumbi ngalo vimba wolwimi
UGervasio Posadas ukhuphe inoveli yakhe entsha, uEl mercader de la muerte. Namhlanje usinika olu dliwanondlebe apho asixelela kancinci ngayo yonke into.
Ukwazi iBarcelona ngaphandle kokubeka unyawo ngaphandle kwendlu kunokwenzeka ngoncedo lwencwadi elungileyo. Yiza, udibane nezihloko eziphambili kunye nababhali bazo.
Iiperks zokuba ugxothiwe yincwadi yenoveli ngumbhali waseMelika, uStephen Chbosky. Yiza, ufunde ngakumbi ngomsebenzi kunye nombhali wawo.
Ukutyhubela imbali, iintshukumo ezahlukeneyo zoncwadi ziye zasekwa kwilizwe leeleta. Yiza ufunde ngakumbi nganye nganye.
Ukwazi indlela yokubhala incwadi liphupha labasebenzisi abaninzi be-Intanethi namhlanje. Yiza kwaye wazi inyathelo ngenyathelo yonke into ekufuneka uyazi ngayo.
URaymond Chandler unomhla wokuzalwa. Umdali womcuphi uPhilip Marlowe, kwimemori yakhe olu khetho lwamabinzana kunye neziqwenga zemisebenzi yakhe.
Ngokwesiqhelo, iinxalenye zencwadi ziye zinganakwa, nangona kunjalo, ukwazi ukuyilwa kwesi sixhobo sixabisekileyo kubalulekile. Yiza ufumane yonke into ngayo.
Ukuwa kweGiants yinxalenye yokuqala yeKen Follet's Trilogy yeNkulungwane, esekwe kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Yiza, ufunde ngakumbi ngomsebenzi kunye nombhali wawo.
Umlingisi waseBritane uBasil Rathbone ngowona uninzi lweeSherlock Holmes ezilungileyo kumdlalo bhanyabhanya. Siphonononga imiboniso bhanyabhanya awayedlala kuyo nge-40
Sibanga ubuhle bolwimi lwethu kwaye sikubonise amanye amagama amnandi ngeSpanish. Ukongeza, sikuxelela ukuba yintoni imvelaphi yolwimi.
Ngena kwaye siza kukuxelela ukuba zeziphi iihaikus, izinto ekufuneka bezinazo kwaye, ukongeza, siya kukufundisa ukubhala eyakho.
UJesús Maeso de la Torre, ongomnye wababhali besizwe abaziwayo beenoveli zembali, usinika olu dliwanondlebe apho asixelela kancinci ngayo yonke into.
NgolwesiHlanu, nge-19 kaJuni 2020, iindaba ezingathandekiyo malunga nokusweleka kombhali uCarlos Ruiz Zafón zikhutshiwe. Yiza, ufunde ngakumbi ngayo.
Ukubaluleka kokuba ngu-Ernest yayingumdlalo wokugqibela weqonga lomdlalo weqonga waseIreland uOscar Wilde. Yiza, ufunde ngakumbi ngomsebenzi kunye nombhali wawo.
Inoveli yezembali yingxelo elandelwayo ethintelweyo kwiziganeko zokwenyani ezingaguqukanga njengeankile yesiza sayo. Yiza, ufunde ngakumbi ngayo kunye nababhali bayo.
Ngaba uyazi ukuba ziintoni izinto zeli bali? Apha sichaza yonke into oyifunayo malunga nale ndlela yokubalisa.
Imibongo ebonakalayo bubugcisa bokumangalisa ngamagama abhaliweyo ayinxalenye yomfanekiso. Ngena kwaye wazi imvelaphi, iimpawu kunye nokunye.
UFederico García Lorca wayeneempawu ezahlukeneyo awayezisebenzisa kwimisebenzi yakhe ukubanika ubomi obukhulu. Ngena kwaye ufumane ukuba ziyintoni na.
Isiphelo sokufa sisavenge sesithathu kwi-epic Three Body Trilogy ebhalwe nguCixin Liu. Yiza, ufunde ngakumbi ngomsebenzi kunye nombhali wawo.
Udliwanondlebe noPere Cervantes, umbhali we-El chico de las bobinas
UPere Cervantes unenoveli entsha, uEl chico de las spools, kwaye namhlanje undinika olu dliwanondlebe apho axelela kancinci ngayo yonke into.
UJames Ellroy, iMad Dog evela kwinoveli yolwaphulo-mthetho yaseMelika, uneminyaka engama-72 namhlanje. Ke sele zikho ezimbalwa ...
UHenry James. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. Iinoveli ezi-5
UHenry James usweleke ngemini efana nale yanamhlanje ngo-1916 eLondon. Ukuphonononga iinoveli zakhe ezi-5 ezimelweyo nezenziwe kwi-cinema.
Iimpuku Amabali malunga nabo ukubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina
Iimpuku Zimbalwa izilwanyana ezinedumela elibi njengazo, kodwa hayi kumaTshayina. Lawa ngamabali okubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina, iRat.
Ngaba izizukulwane ezitsha zifunde kancinci? Lo ngumbuzo oye wanyanzela iingqondo zabaninzi kule minyaka idlulileyo. Yiza, ufunde kancinci ngayo kwaye unike uluvo lwakho.
URaquel uza eNovariz ukwenza indawo, apho ufunda ukuba uza kuthatha indawo yomntu owafa ngokumangalisayo. Yiza ufunde kabanzi malunga nomsebenzi kunye nombhali wawo.
Umntu osemtsha ofunda rhoqo ukhulisa ukucinga kwakhe, ingqwalaselo yakhe kunye nesigama sakhe. Yiza uzokufumanisa iincwadi ze-6 zolutsha ezenzelwe wena.
Imisebenzi yalo mbhali wase-Welsh yimbeko kubuchule bokuyila kunye nokucinga, kunye neeplani ezintsha nezithandekayo. Yiza ufunde kabanzi ngobomi bakhe kunye neencwadi zakhe.
ICicero. Amaqhekeza ama-3 omsebenzi wakhe kwisikhumbuzo sokufa kwakhe
UMarco Tulio Cicero wayengoyena mntu wayedume ngokuthetha eRoma kwaye lelinye lawona magama aziwayo kwimbali. Ezi zezinye iziqwenga zomsebenzi wakhe.
Ukuba ungumthandi wokufunda, kwaye useMadrid, eli nqaku lenzelwe wena. Yiza ubone iindawo ezifanelekileyo zokufunda kwikomkhulu laseSpain.
Emva kokuvalwa kweCírculo de Lectores nguGrupo Planeta kunye nokonakaliswa kweefayile zayo, i-BNE ithatha indawo yokuma. Yiza ufunde ngakumbi ngetyala.
UDisemba uyeza kwaye iindaba ezimnandi zokuhlela ziyaphuma. Namhlanje ndibalaselisa ezi-4 zibonisiwe zabafundi abancinci kunye nabamabonakude.
Ukunyuka kweencwadi zolutsha komelele kule minyaka idlulileyo, kunye namacebo ayo atsalela abantu abatsha. Yiza ufunde ngakumbi ngale misebenzi kunye nababhali bayo.
URosalía de Castro wayengumbhali waseSpain owayenomsebenzi ojolise ekunikezeleni imvuselelo kulwimi lwaseGalician. Yiza ufunde ngakumbi ngobomi bakhe nomsebenzi wakhe.
ICervantes Virtual yiwebhusayithi ejongene nokufunda kunye nokusasazwa kolwimi lwaseSpain. Yiza ufunde ngakumbi malunga nomxholo kunye nembali.
IsiLatini lulwimi olunomdla kakhulu, ukufunda kunika umbono omtsha kwaye kukusondeza kulwazi lwakudala. Yiza ufumane indlela yokufunda ngayo.
Ukufunda sesinye sezona zixhobo zokufunda zigqibeleleyo neziyimfuneko. Sikuxelela ukuba kutheni ukuqala ngeNkosana eNcinci kukhokelela kwinto eyodwa.
Ngaba iqela lomculo linokufumana izizukulwana ezipheleleyo ukuba zivule incwadi okokuqala ebomini babo? Impendulo nguewe ". Sithetha nge-Blind Guardian
Omnye unyaka kunye nokufundwa okuninzi kudlule ezandleni zam. Ndikhetha izinto endizithandayo kwaye ndibalaselisa umlinganiswa. Zili-7 iinoveli ezimnyama, zothando nezodidi.
Nge-11 kaNovemba. ISan Martin. Kwaye sele uyazi: olu suku luza kuzo zonke iihagu. Kukwincwadi. Ndijonga ezi ncwadi zintandathu apho iihagu zizinto eziphambili okanye into ebaliswayo ngababhali abohlukeneyo.
Sizicwilisa kwi-biography kunye neencwadi eziphambili zika-Eduardo Mendoza, omnye wababhali abaphambili baseSpain bexesha lethu.
UYo, uJulia, nguSantiago Posteguillo, yinoveli yembali ebekwe kubukhosi baseRoma kwaye ibalaselisa umfazi onamandla.
Ukuntywiliselwa kwibhayiloji kaDan Brown kunye neencwadi ezilungileyo kuthetha ukwenza njalo kwilizwe eliyimfihlo leesimboli, iyelenqe kunye neenoveli zebhloko.
Ukuntywiliselwa kwibhayiloji ka-Edgar Allan Poe kunye neencwadi ezibalaseleyo kuthetha ukuyenza kwindalo emnyama kunye ne iconic egcwele amabali amnandi.
Olu khetho lokufundwa kukaBarack Obama ngasekupheleni kwehlobo kubandakanya ezinye zeetayitile zaseAfrika kunye nezinye eziphembelela.
Iimuvi eziphambili ezisekwe kwiincwadi
Ezi bhanyabhanya zibalaseleyo ezisekwe kwiincwadi zenza ukhetho olugqibeleleyo kwihlobo leemovie ... okanye ufundo olukhulu echibini.
Ezi ndawo zaseSpain ezibonakala kuncwadi zisisa eLa Mancha del Quijote okanye kwiBaztán Valley engaqondakaliyo.
Ezi ncwadi zineziphelo ezibalaseleyo kwimbali ziqinisekisa amandla amabali athile ukusibamba siye kwimigca yabo yokugqibela.
Ibali lesandla sika-Handmaid okanye Amanxeba avulekileyo zezinye zezi ngcelele zisekwe kwiincwadi ongenakuphulukana nazo kweli hlobo.
U-Ernest Hemingway okanye u-Emily Dickinson bangabanye bababhali abaphambili baseMelika imisebenzi yabo esele iyinxalenye yembali.
Ngaphandle kwenqanaba labo njengemisebenzi emikhulu yoncwadi, ezi ncwadi kunzima ukuzifunda azisoloko ziyanelisa bonke abafundi.
Sisikhumbuzo esitsha sokuzalwa kuka-AJ Cronin, ugqirha waseScotland kunye nombhali, umbhali weCitadel okanye The Adventures of a Black Briefcase.
Namhlanje uCamilo José Cela ngewayeneminyaka eli-102 ubudala. Ndiyamkhumbula ekukhetheni amabinzana kunye neendinyana ezivela eLa familia de Pascual Duarte.
Ubugcisa abukho ngenjongo yokuba "buchaneke", kuba sele sinabo uhanahaniso lwasentlalweni mihla le, kodwa ukuphakamisa ubuhle kunye nokoyikeka kwemeko yomntu. Uncwadi kunye nokuchaneka kwezopolitiko kufana neoyile kunye namanzi.
Umlingo ozelwe ngaphandle kwesidingo sokujongana nenyani yelizwe licinezelwe njengoko linethemba longeza kwezinye zeencwadi ezilungileyo zoncwadi lwaseCuba.
Umhlaba ophakathi, ii-adventures ze-wizard encinci okanye ipratchett yendalo iyangena koku kulandelayo kukhetho lweencwadi ezintle ezithandwayo.
Ukusuka kwiivenkile zikaRamayana ukuya kwimeko yangoku yabasetyhini kwilizwe laseAsia, ezi ncwadi zintle malunga neIndiya zihlalutya ubuso obahlukileyo bezinye zezona zizwe zibalaseleyo emhlabeni.
UNeruda okanye uDickinson bangabanye bababhali ababandakanyiwe kolu khetho lweencwadi zemibongo ezibalaseleyo kwimbali elayishwe ziingoma ezingaphelelwa lixesha.
Ukusuka eLa Celestina ukuya kwiJavier Cercas fanpic, sihamba ngeendlela ezahlukeneyo zamazwi ethu kwiincwadi ezilandelayo ezilungileyo zaseSpain kwimbali.
Imibala yaseIndiya okanye imibhiyozo yaseSan Fermín idibana kolu luhlu lulandelayo lweencwadi eziphambili onokuhamba ngazo ngeHemingway, iSteinbeck okanye iKerouac.
Ezi ngxelo zibalaseleyo zababhali kwi-Instagram zivumela ukuba sikhangele kwindalo yoonobumba kunye nee-anecdotes zabanye ababhali abakhoyo ngoku.
URussell Crowe. Abalinganiswa bayo abathathu ababaluleke kakhulu kuncwadi.
Umlingisi uRussell Crowe ngumnqweno wam wokwenza imiboniso bhanyabhanya kwaye ujika i-54 namhlanje. Ukubhiyozela, ndiphonononga abalinganiswa bayo ababalulekileyo.
Ngokuhambelana nokupapashwa eSpain kobugqirha, sihamba ngamabali eencwadi zaseSweden ezingafakwanga kwezona ncwadi zibalaseleyo zikaCamilla Läckberg.
Namhlanje, phakathi enyakeni u-2018, umntu akanakukwazi ukuvula inoveli ngaphandle kokufumana imiyalezo emine evela kwiWathsApp kunye nezaziso ezithandathu ezivela kwi-Twitter. Makhe sijonge iingxaki zokufunda kwilizwe elibukelwayo.
La mabali mabalaseleyo kwimbali aqinisekisa amandla oncwadi amafutshane avela kwabanye bababhali kwindalo iphela kwihlabathi leeleta.
Kwinqaku lethu namhlanje sicinga ngaphezu kwabo bonke abafundi-ababhali bethu kwaye sinikezela ngeengcebiso zokukhetha amagama afanelekileyo kubalinganiswa bakho boncwadi.
Kwinqaku lethu namhlanje sikuphathela amanqaku okubhala anomdla ukuze uwazi ukuba awukabinabo ubungqina bawo.
Iprojekthi yeHogarth Shakespeare yaqala ngo-2014 ngenjongo yokubhala kwakhona uncwadi lwesiNgesi lwe-bard kubaphulaphuli benkulungwane yama-400. Kwakuyinxalenye yemibhiyozo yesikhumbuzo seminyaka engama-2016 yokusweleka kwakhe ngonyaka ka-XNUMX. Aba ngabanye bababhali abagubungela imisebenzi yakhe.
Ngaba ubusazi malunga nobukho benkxaso-mali yokudala indalo? Ukugxekwa kolu hlobo lweprojekthi olungakhuthazi uncwadi olulungileyo.
Kule nqaku sikwazisa ngesicelo esitsha seencwadi kunye neencwadi ezimanyelwayo: Ngaba uyasazi isicelo seNcwadi? Apha sithetha ngaye.
Ukusuka kwidolophu yaseMacondo ukuya kwimibongo yolutsha lwaseChile, ezi ncwadi zintle kakhulu zoncwadi lwaseLatin American zibandakanya ezona ncwadi zintle zivela kwelinye icala leAtlantic.
Iincwadi ozilahlayo, ezinye ziyarisayikilisha
Namhlanje sikuzisa enye yeendaba othanda kakhulu. Eli linyathelo elilungileyo eliqhutywa yindawo yokulahla inkunkuma e-Ankara, eTurkey.
Kwinqaku lethu namhlanje, ngo-Eva weKrisimesi, sikuzisa umdla wokubhala owenzeka e-Iceland. Ngaba uyazi ngale nkcubeko?
UHitler, uFranco, uGandhi, uDisney ... Bonke babelazi ibali likaFerdinand Bull, kodwa bonke basabela ngendlela eyahlukileyo. Ngaba uyazi?
Namhlanje sithetha ngababhali, ngokukodwa sikwazisa ukuba ngowuphi umbhali ongumfazi opapashwe ngonyaka wokuzalwa kwakho. Ngaba ubazi bonke?
Namhlanje ibhulorho ephakathi iphakathi siza nenqaku elichaza u-Oscar Wilde, uWilliam Shakespeare, uLeon Tolstoi, ... Bonke ababhali ababalaseleyo, ngaphandle kwamathandabuzo.
Namhlanje, umhla we-10 kuNovemba, kubhiyozelwa uSuku lwamaThala eeNcwadi. Inyathelo labathengisi beencwadi kulo lonke elaseSpain lokukhuthaza ukuthengwa kweencwadi.
Ezi ncwadi zilishumi zothando zilungileyo kwimbali zivusa amandla amakhulu kwihlabathi ngohlobo lwamabali athe ngoku aba ziincwadi zakudala zoncwadi.
Ezi ncwadi zili-10 zibalaseleyo zokufundwa kuluhlu lweHalloween ukusuka emsebenzini owoyikisayo kaStephen King ukuya kwinoveli kaJack yeRipper.
Kwinqaku lanamhlanje sikunika isishwankathelo somdlalo "La casa de Bernarda Alba" nguFederico García Lorca, umdlalo weqonga.
Kule mpelaveki ufakelo lwamashumi amathandathu anesithandathu lweeMbasa zePlaneta zibanjelwe e-Barcelona. Sikuxelela yonke into kule post.
Ngaba unokwenza ingxelo ebhaliweyo? Kwi-Actualidad Literatura, sikunika indlela ukuze amagqabantshintshi okubhaliweyo angabeki ngxaki kuwe.
Namhlanje sikuzisela inqaku elahlukileyo kwelesisoloko sikunikeza lona: Ikhosi "yeLungelo lokushicilela" enokuba nomdla kuwe njengombhali.
Kwinqaku lanamhlanje sithetha kwakhona ngeBhaso likaNobel lowe-2017 kuNcwadi: awona mabinzana mabi ka-Kazuo Ishiguro. Ezinye zithathiwe kwiincwadi zakhe ...
Qikelela incwadi endiyifunda kwezi ndinyana
Kwinqaku lanamhlanje sikuphathela umdlalo wokubhala: Qikelela ukuba le ncwadi ndiyifunda kwezi ndinyana zikuleya ndiyibeke apha.
Ukusetyenziswa kwe-ellipsis okanye ubugcisa bobuqili zibandakanyiwe kwezi ngcebiso zi-5 zilandelayo zokubhala ibali elincinci.
Ihlathi lekhristal_. UJohn McClaine uyahlekisa (kunye nevesi).
_I-jungle yeglasi_, yeklasikhi evela kwi-80s cinema, iba yinto ehlekisayo. UJohn McClaine useliqhawe, kodwa ngeli xesha utsalelekile kwaye uthetha kwivesi.
Siphonononga izinto ezintsha ezi-5 ezisandula ukuphuma okanye eziza kubakho kwimarike kungekudala. UAuster, uMarías, uPosteguillo, uFollett kunye noSkal babonisa imisebenzi yabo emitsha.
Namhlanje sinika elinye lamanqaku esiwathandayo, elinye lamabinzana. Ngesi sihlandlo sikulethela amabinzana angama-25 ababhali ababhinqileyo, bakudala kunye nabangoku.
Imixholo enje ngesicwangciso-qhinga okanye ukukhangela intsingiselo yobomi ijongiwe kwezi ncwadi zintlanu zibalulekileyo eziqhubeka zisinika izifundo ezikhulu.
Ewe ewe, njengoko kukho usuku phantse kuyo yonke into, asinakuba ngaphantsi: Namhlanje lusuku lwehlabathi lokufunda kwabathandi!
Uphengululo lwetrilogy yomlawuli uTrajano, nguSantiago Posteguillo, kumsitho wokukhumbula isikhululo senkulungwane ezili-19 okoko kwasweleka umlawuli omkhulu waseSpain.
Kule nqaku sikubonisa ngeendaba ezimnandi kwilizwe loncwadi: Ungacinga ntoni nge-'Netflix 'okanye' HBO 'yeencwadi?
Siphinda siqwalasele iWuthering Heights, nguEmily Brontë, ebusweni babalinganiswa bakhe abalinganiswa kumfanekiso wakhe kamabonakude.
Ukusuka eLa Comarca ukuya kwidolophu yaseGabriel García Márquez, ezi ndawo zisixhenxe zoncwadi onokuzityelela ziya konwaba abafundi abahambahambayo.
Namhlanje sikuphathela into "ephekayo" ejikeleze isixeko saseKassel, eJamani: IParthenon eAthene yakhiwe ngeencwadi ezili-100.000 ezingavumelekanga.
Kwinqaku lanamhlanje sifuna ukuhlawula irhafu encinci kumfazi obalaseleyo: UFrida Kahlo kunye nefuthe lakhe kuncwadi lwehlabathi.
Kweli nqaku sikuphathela uthotho lwamabinzana asuka kwiincwadi kunye nababhali ukoyisa iingxaki ezinzima ebomini. Yeyiphi oyithandayo?
Ngaba uyazi iClassics yokuqalisa?
Kule nqaku ndikulethe ukufumanisa. Sisiqalo se-iClassics, esinemvelaphi e-Barcelona. Indlela eyahlukileyo yokufunda iiklasikhi zakudala.
Ukuyila isiciko sencwadi ngumsebenzi ofuna ubuqili obuthile, incasa elungileyo, inkuthazo kunye nokuninzi, okuninzi kwengqondo.
Kule nqaku sikuxelela indlela yokulungisa inyathelo lakho ngenqanaba ngenyathelo kunye neziqu zakho ngaphandle kokubhenela kubantu besithathu. Uya konga imali!
Baninzi, kodwa namhlanje sithetha ngamapolisa ama-4, asebenzayo okanye asele esidla umhlala-phantsi, ekwangababhali aba-4 abadumileyo kwilizwe liphela kunye nemisebenzi emangazayo.
Ezi ngcebiso zi-7 zokukhetha isihloko esifanelekileyo kwincwadi yakho ziya kwenza kube lula kuwe ukwenza ngamanye amaxesha umsebenzi onzima wokushwankathela umsebenzi wakho ngamagama ambalwa.
Amabinzana angama-25 okukhumbula uArthur Conan Doyle
Namhlanje sikulethela amabinzana angama-25 ukukhumbula uArthur Conan Doyle, umyili wabalinganiswa abathandwa kakhulu abathandwayo: USherlock Holmes.
Namhlanje sikuzisa isicatshulwa esifutshane sefilosofi kunye nombhali u-Ayn Rand. Kwakusondele kwiminyaka engama-70 eyadlulayo, ucinga ntoni ngesi siprofeto?
Kwinqaku lanamhlanje sikuxelela iingcebiso ngokubanzi malunga nokuba ungalikhetha njani igama elifanelekileyo labalinganiswa bethu boncwadi.
Kwinqaku lanamhlanje sikulethela iinoveli ezipapashwe kwinkulungwane yama-XNUMX ezibekwe kwamanye amaphondo aseSpain (phantse zonke).
Kwinqaku lanamhlanje sikhumbula umbhali omkhulu osele esishiyile: UGabriel García Márquez kunye nemigca yakhe eli-13 ukuze baphile. Ubusazi?
Ngaba uyazi malunga nobukho bethala lencwadi lemilingo? Ime kwi-attic eManhattan kwaye umseki wayo nguBill Kalush. Ngaba unomdla kwisihloko?
Sinikezela uphononongo lwencwadi yamva nje ngumbhali uBlue Jeans. "Into elula njengokuhlala nawe" iyayiphelisa le saga. Fumanisa okungakumbi kule posi.
Kwinqaku lanamhlanje, iActualidad Literatura iphakamisa umdlalo wokubhala: Ngubani obhale ntoni? Bangaphi ababhali oya kuthi ulunge?
Amabinzana angama-20 ababhali bakudala bala maxesha
Kwinqaku lanamhlanje sikulethela iikowuti kunye neengcinga: amabinzana angama-20 ababhali bakudala bala maxesha.
Aba babali bebali be-5 ababalaseleyo bembali bazihlukanisa nezinye iintlobo zokubalisa ezibonisa uthando lwabo kuncwadi olufutshane.
Ukusukela namhlanje, nge-26 ka-Epreli, isixeko saseAlmería siphila sigcwele ziivesi ezigunyaziswe yindawo yeNkcubeko, iMfundo kunye neNkcubeko yebhunga lesixeko.
Ezi ziimpazamo zokubhala rhoqo xa ubhala incwadi yethu esizenza ngokuqinisekileyo njengoko sibhala.
Kwinqaku lanamhlanje sikuxelela indlela yokwakha abalinganiswa boncwadi abanokuthenjwa abatsala umfundi kwaye banomdla.
Ingqokelela yomculo ekhuthaza umbhali H. Murakami yaziwa. Yenziwe nguMasamaro Fujiki kwaye sinokuyifumana kwiSpotify.
Ezi zizathu ze-5 zokubhala ngesandla zisidibanisa ne-pure, evuselelayo kunye neyona ndlela iluncedo ngakumbi kunokuba besicinga.
Kwinqaku lanamhlanje siza kukuxelela malunga nenkonzo yasimahla ye-imeyile esisandula ukuyifumana: 'Bookflash'. Ubumazi?
ESpain kukho imivalo engaphezulu kunevenkile zeencwadi ... Okanye akunjalo? Sifumene idolophu eneevenkile ezininzi kunee-bar ezithathwa njenge-Villa del Libro.
Dibana neThala leeNcwadi-ihotele, 2 kwayi-1, eMantla eWales: Ithala leencwadi laseGladstone kwiindaba zoNcwadi. Iincwadi, iikhosi, iminyhadala kunye nenani elingenasiphelo lezinye izindululo.
Kule nqaku asizisi kuluhlu lweencwadi kodwa sikulethela isincomo kwiimveliso ezi-3 ngevumba loncwadi oya kufuna ukuba nalo: amakhandlela kunye nesiqholo.
Ngamanye amaxesha iincwadi ziza kuwe zikuthembisa ngeendawo ezintsha, ezinye zikukhuthaze, ezinye zikuxelela ...
I-Actualidad Literatura iveza udliwanondlebe nombhali u-Israel Moreno, umbhali "Ngomso yiHalloween", "Namhlanje yiHalloween" kunye "Emva komculo wam".
Intlama, inoveli yokugqibela uBukowski wasinika yona
Ngaba ningabathandi beBukowski? Ukuba kunjalo okanye awukasithathi isigqibo ngalo mbhali, sikubonisa uphononongo lwencwadi emnandi, "Intlama".
"Rumor of the dead" yenye yezona zinto zibalaseleyo zombhali waseSpain u-Enrique Laso. Sikuxelela ngakumbi ngale ncwadi kule post.
Kwinqaku lanamhlanje sithetha ngoThomas Phillipps kunye nothando-lokuthanda iincwadi. Ngaba uyazi ukuba lithetha ntoni igama elithi Bibliomaniac? Apha uya kufumanisa.
I-Actualidad Literatura ifumene ithuba lokwenza udliwanondlebe noSol Aguirre, umbhali we "Someday not a day of the week" kunye nomyili we Las clave de Sol
Yintoni 'ukuthengisa kwi-Intanethi' kwababhali?
Kwinqaku lanamhlanje sikunika uthotho lwezitshixo zokwenza intengiso elungileyo kwi-Intanethi ukuba ungumbhali kwaye ufuna ukukhuthaza umsebenzi wakho.
Iindaba zoncwadi zanamhlanje zilunge kakhulu: umfundisi ochithe iminyaka engama-30 yobomi bakhe ehlangula iincwadi emgqomeni kwaye sele enendawo yakhe yokugcina iincwadi.
Okwangoku ababhali abangama-70 abavela e-Iceland bafumana umvuzo we-2400 ye-euro ngokuzinikela kwabo ekubhaleni umsebenzi wabo wokubhala.
Ukuba ungumbhali kwaye ujonge kwaye uthabathe ikhosi efanelekileyo yokubhala (ibali elifutshane, inoveli, ubuchule bokuyila, njl.
Kwinqaku lanamhlanje siza kuthetha nge 'Convénzeme', inkqubo yoncwadi eboniswe yintatheli uMercedes Milá.
Iprojekthi yamaBali amafutshane lilinge elizelwe kwi-Intanethi elinenjongo yokukhuthaza uncwadi olufutshane kuzo zonke iimbombo zomhlaba.
Inqaku esilibonisa lona namhlanje, ubuncinci kuzo, limalunga nemivalo ephefumlelwe ziincwadi kunye nababhali. Into endiyithandayo iseNew Zealand.
Ithala leencwadi iBeinecke yiparadesi yabo bonke abathandi beencwadi ezinqabileyo kunye nemibhalo-ngqangi. Sikuxelela ngakumbi malunga neli thala leencwadi limangalisayo.
Namhlanje ngeMigqibelo, sikuphathela imibhalo emibini ngoonobumba abakhulu boncwadi: uWalt Whitman noPablo Neruda. Uncwadi lweentsuku ezimbi!
Ukubhala ngonyango yindlela elungileyo yokubuyisela impilo yethu. Kule posi sikunika iingcebiso malunga nezibonelelo zayo.
Namhlanje sikuzisela inqaku elishwankathela ukuba yintoni 'ibhokisi yeNcwadi'. Emva kokuphumelela kwamanye amazwe, ekugqibeleni ufika eSpain.
Ezi zizathu zili-8 zokufunda ngakumbi amabali kunye namabali ziya kukukhuthaza ukuba ubuyele kuhlobo oqhele ukulushiya ecaleni.
Sinikela ngelona thala leencwadi lishumi lilungileyo kwilizwekazi elidala. Ukuba uyaluthanda uncwadi kunye nohambo, ungaphoswa yinto elandelayo.
I-Actualidad Literatura ikunikezela ngebrashi yesitolimende samva nje, "Iphumla phi imiphefumlo?". Kufuneka kubalandeli beAgent Ethan Bush.
Ukuba uyawathanda amazwe angaqhelekanga, ndikugcinele idosi yoncwadi ukuba uhambe kwaye uphuphe ngeendawo ezikude. Ibizwa ngokuba yi-21 Princess Street.
Iimpazamo eziqhelekileyo xa ubhala incwadi, ngubani omnye kwaye ngubani oye wenza ubuncinci ngamanye amaxesha. Ngaba ezi iya kuba ngunobangela wokungasipapashi?
Namhlanje ndikuzisela ingcebiso yobuqu: Umculo onokukunceda ubhale izicatshulwa zakho zoncwadi okanye nokuba ziyintoni na.
U-Barack Obama ucebise ukuba afunde iincwadi ezi-4 kwintombi yakhe uMalia, ezimbini zazo ngokucacileyo zingumfazi.
Kwiingxelo zoncwadi ezi ntsomi zilishumi zilandelayo malunga nababhali eziyinyani (kunye nezinye ezingezizo) ziyaqhubeka nokubetha.
I-RAE iqale unyaka ibandakanya amagama amatsha, anokuthi okanye angasithandi, kodwa inyani kukuba sele uwabonile ebhaliwe phaya ...
Aba babhali babalaseleyo babaliweyo lihlabathi baqinisekisa ezo zinto zinobugcisa zilahlekile ngexesha.
Ngokwedatha evela kwi-Arhente ye-ISBN, kwi-2014, kunyaka ophelileyo ekukho iirekhodi, eSpain ...
Thandana nomntu ofunda kwaye afumanise ilizwe elimangalisayo loncwadi kunye naye okanye naye. Akukho nto ingcono kunokwabelana ngokufunda.
Inqaku lanamhlanje lisithatha ukuba sihlolisise ngokufutshane ubomi kunye nomsebenzi ka-Isaac Asimov omkhulu okoko wazalwa ngalo mhla ePetrovichi, eRashiya.
U-2017 ufika, iinjongo ezintsha kunye namathuba. Ukuba ucinga ngokuphuhlisa icala lakho loncwadi, ungaphoswa zizinto ezinikezelwa nguAula de Escritores.
Ukuba awusazikhumbuli iiklasi zoNcwadi zeziko, apha sihlaziya imemori yakho kancinane: Izixhobo zoBuchule kuLwazi loncwadi.
Isavenge sesihlanu se-Millenium saga okanye esitsha nguDan Brown zezinye zezindululo ezibandakanyiweyo kwezi ncwadi zisi-7 esiza kuzifunda ngo-2017.
Kweli nqaku besifuna ukukhumbula umbhali waseUruguay uHoracio Quiroga, obhale lo mgaqo weli bali uligqibeleleyo. Ubumazi?
Ucinga ntoni ngezi ndaba zokuhlela njengezimvo zesipho? Ngaba siyicebisa kuSanta Claus okanye sibuza iLos Reyes Magos?
Le yimilinganiselo yombhali olungileyo endayibhalayo kwiminyaka embalwa edlulileyo xa ebendibhalela rhoqo. Ndihlala ndicinga ngokufanayo. Ingaba uyavumelana?
Ihlabathi kwimibongo eli-10
Olu hambo lokujikeleza umhlaba kwimibongo eli-10 lusithatha kubusuku obungaqhelekanga baseIndiya nakulwandle uDickinson awayelangazelela ukulufumana.
Sinikezela ngokudibanisa ezona bhayografi zibalaseleyo ekufuneka zifundwe nguye nawuphi na umlandeli wobugcisa besine.
Njengokuba sikufutshane ngeKrisimesi kwaye siyazi ukuba baninzi benu ababhalela i-Magi ileta, apha size kuninceda ngezi zipho zi-5.
Fumana kule post ezinye izimvo ukuba ucinga ukunika iincwadi zabantwana kule Krismesi. Kukho iincwadi ekufuneka umntwana ngamnye azifunde.
Ubudlelwane phakathi kukaFidel Castro kunye noncwadi lwaseCuba kule minyaka ingamashumi amathandathu idlulileyo butyhila imiba enje ngokuthinjwa, ukuhlala kwamanye amazwe okanye ingcinezelo.
Kule nqaku sikulethela amabinzana ali-10 abhaliweyo okanye athethwe ngababhali abahlukeneyo abali-10 kwesona sihloko sithandwayo kwinani elikhulu leencwadi: uthando.
Kule nqaku siza kukunika iinyani ezinomdla malunga nababhali abathile. Ngeli xesha bangoJules Verne okanye uShakespeare, phakathi kwabanye.
Ubudlelwane phakathi kukaGabriel García Márquez kunye nombala otyheli uyimfihlakalo, singatsho nokuba sikholelwa kwiinkolelo. . . kodwa nomlingo.
Eli nqaku, elinomthombo wokuqala kwiwebhusayithi yePapel en Blanco, lisizisela ulwazi kunye nedatha engaziwayo evela kwilizwe loNcwadi. Ubusazi?
UDante okanye uAllende ngababhali ngasemva kwezinye zezi ncwadi zisi-8 zibhalwe elubhacweni eziye zabonakalisa ubomi obungasokuze babuye.
Ukuba uthanda ukungcamla iwayini elungileyo ehamba kunye nokufundwa okuhle, ngoku ungazenza zombini kwifomathi enye: Librottiglia.
Uyazibona ezinye zeziqwenga zoncwadi kunye / okanye abalinganiswa? Sibuye ngomnye wemidlalo yethu yoncwadi! Khuthaza ukuba uthathe inxaxheba.
Ngomso, xa usiya emsebenzini, khetha ukujonga elinye lala mabali ma-7 oza kuwafunda ngexesha lohambo kwizithuthi zikawonkewonke.
Imvumi, imbongi, umbhali, ngoonyana bakhe utata olungileyo, kwaye kuthi, ekuboneni kokuqala, wayebonakala njengomntu othandekayo: Imbeko kuLeonard Cohen.
Ndifuna ukuthatha ezinye zeetekisi zam ezingaphelelwa lixesha: ezinye ngenxa yobukrelekrele bazo, ezinye ngokungaphelelwa lixesha, ezinye ngobuhle bazo.
Ngokungaqondakaliyo, umzobo onxulumene noHarry Potter ubonakele eVigo kwidolophana engaphezulu kweminyaka engama-4.000 XNUMX ubudala.
Ezi ntlobo zoncwadi zingaziwayo zintandathu zivela kwimozulu eyoyikisayo yentsomi ukuya kuguqulelo lwasempuma lwento eyaziwayo yomlingo.
Inkuthazo eyongezelelweyo yokukhuthaza abantwana ukuba bafunde. Namhlanje, abantwana bethu kunye nabafundi bafunda kancinci, ngale vidiyo imfutshane uya kukhuthaza ukufunda.
Kule nqaku siqokelela ezinye zeempendulo kwiNobel Prize yoLwazi, uBob Dylan. Abanye bavela kubantu abadumileyo, abanye bevela kwiitwitter ezaziwayo.
UDolores Redondo kunye noMarcos Chicot Álvarez baba ngabaphumeleleyo kwaye bagqibe kwelokugqibela kwi-2016 Planeta Award, ebibanjwe phezolo e-Barcelona.
Ukuba ubhala inoveli yakho elandelayo kwaye ufuna inkuthazo eyongezelelweyo, nantsi le mibhalo yoncwadi ikhuthazayo.
Kwiintsuku ezimbalwa sinokufumana iincwadi zasimahla ePlaza de España, eSeville.
I-36% yabantu baseSpain abazifundanga iincwadi
Ngokwophando lwamva nje olwenziwe liZiko loPhando ngezeNtlalontle (i-CIS), ama-36% abantu baseSpain abazifundanga iincwadi.
Yayingumfazi owakha ithala leencwadi lokuqala phantse kwiminyaka eliwaka emva kweAlexandria.
Kwezi webhusayithi kunye nokusetyenziswa unokuzikhuphelela iincwadi ngokusemthethweni. Uya kuzifumana zombini simahla kwaye zihlawulwe. Uyakhetha!